Isla Canela any Huelva: zoro voajanahary mahafinaritra | Vaovao momba ny dia
Isla Canela any Huelva
Luis Martinez | | Toerana fitsangatsanganana
Vavan'ilay Guadiana ao Ayamonte
Isla Canela, ao amin'ny Huelva, dia miorina amin'ny faritra manana tombontsoa ao amin'ny Saikinosy Iberia. Amin'ny lafiny avaratra dia misy sisiny Ayamonte ary ny atsimo dia manome anao morontsiraka fito kilometatra tsy latsaky ny Ranomasimbe Atlantika. Fa kosa, any andrefana dia mifanitsy amin'ny Renirano Guadiana, raha manakaiky kokoa ny atsinanana Isla Cristina.
Noho izany, dia toerana misy ny tsara tarehy Costa de la Luz ary dingana iray miala eo Algarve Portigey. Voaomana manokana ho an'ny fizahan-tany, manome hotely tsara ianao, kianja golf, marina ary zotra haleha an-tongotra, bisikileta na mitaingin-tsoavaly. Raha te hahalala toerana manana tombontsoa toa an'i Isla Canela any Huelva ianao dia manasa anao hanaraka anay.
1 Inona no ho hita sy atao any Isla Canela (Huelva)
1.2 Tanàna manodidina
1.3 Las Salinas del Duque, tranokala voajanahary mahavariana ao Isla Canela (Huelva)
1.5 Ny morontsirak'i Isla Canela (Huelva)
1.6 Kianja golf
1.7 Ny algarve
2 Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any Isla Canela (Huelva)
3 Ahoana no ahatongavana any Isla Canela
4 Inona no hohanina ao Isla Canela
Inona no ho hita sy atao any Isla Canela (Huelva)
Ho fanampin'ny faritra fizahan-tany dia misy ivon-toerana roa ao Isla Canela. Ary koa toerana voajanahary tsy manam-paharoa, ny an'ny ny Salinas del Duque, miaraka amin'ireo honahona mahatalanjona onenan'ireo karazam-borona marobe. Ho fantatsika rehetra izany.
Io no faritra manan-tantara ao Isla Canela ary mifanila amin'i Ayamonte. Inoana fa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia natsangana ho tanàna fanjonoana izy na dia nonina taloha be aza. Raha ny marina dia iray amin'ireo manintona azy ny Mausolera romana. Niorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX taorian'i JK, dia mety ho anisan'ny toerana lehibe kokoa misy orinasa amina trondro.
Mausolika romana an'ny Punta del Moral
Miala amin'i Ayamonte ity tanàna ity dia afaka mahita ny Tilikambon'i Isla Canela, arofanina fiarovana mba hisorohana ny fidiran'ny jiolahin-tsambo. Izy io dia tilikambo fanilo izay namboarina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Amin'izao fotoana izao dia voatanisa ho tsangambato izy.
Natokana ho an'ny jono koa dia azonao jerena ao ny Chapel an'ny Our Lady of Carmen, natsangana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX teo amin'ny taolan'ny zoky iray. Araka ny tondroin'ny anarany, dia misy sarin'i Virjin'i Carmen, olomasina mpiaro ny tantsambo, izay entina an-tsehatra isan-taona amin'ny 16 Jolay.
Las Salinas del Duque, tranokala voajanahary mahavariana ao Isla Canela (Huelva)
Ny Salinas del Duque dia tontolo voajanahary mahafinaritra noforonin'i honahona ary onenan'ireo karazana vorona anaty rano izay miompy sy miteraka ao aminy. Azonao atao ny mitsidika azy ireo an-tongotra na bisikileta zotra maitso noforonina noho izany antony izany ary jereo ny karazana toy ny flamingo, ny osprey, ny tern na ny cormorant. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hanao izany amin'ny sambo kely.
Io no renivohitry ny tanàna misy an'i Isla Canela. Tanàna kely misy mponina manodidina ny roa alina eo izy izay feno hatsarana sy tsangambato mahatalanjona. Angamba ny tena an'ohatra dia ny Lapan'i Ayamonte, natsangana tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ary naverina ho lasa parador de turismo ankehitriny.
Plaza de la Laguna any Ayamonte
Fa manasongadina ihany koa ny Baluarte de las Angustias, sisa amin'ny rindrin'ny tanàna taloha ary mifanila amin'ny fiangonana mitovy anarana io, fananganana taonjato faha-XNUMX tsara tarehy izay niavaka ny fizaran-tany tamin'ny Renaissance sy Baroque. Miaraka amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, tsangambato hafa izay tsy maintsy hitanao amin'ity tanàna ity ireo Trano fivarotana La Merced sy fiangonana, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary an'ny an'ny Masera Rahavavy Mahantra; ny fiangonan'ny San Francisco ary ny Salvador, nanambara Assets of Cultural interest; ny trano fiangonana San Antonio ary ny Socorro, ary koa ireo trano mendri-kaja an'ny Marquis of Ayamonte y Grande, avy tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo.
Ny morontsirak'i Isla Canela (Huelva)
Na eo aza ny voalaza rehetra, ny iray amin'ireo manintona ny tanànan'i Huelva dia ny morontsiraka mahafinaritra, izay manana fito kilometatra, araka ny nolazainay. Misongadina eo amin'izy ireo ny antso Morontsiraka Isla Canela miaraka amin'ny fasika volamena sy ny rano madio mangarahara. Manana halava kilometatra sy sasany ary sakan'ny efapolo metatra izy. Raha te hahalala azy ianao, dia handro, dia ho liana ianao hahafantatra fa manana serivisy rehetra, manomboka amin'ny famonjena hatramin'ny trano fidiovana ho an'ny daholobe, ary milamina ny ranony.
Raha te hilalao golf ianao, ao Isla Canela (Huelva) dia hahita toerana mahafinaritra ianao. Izy io dia manana saha roa tafiditra ao anaty honahona, ny Rohy mankany amin'ny lohasaha Guadiana ary ny Fianarana taloha Isla Canela, samy misy lavaka valo ambin'ny folo. Ao amin'izy ireo koa ianao dia manana trano fisakafoanana ary hotely mihitsy aza.
Salinas del Duque Natural Park
Raha mitsidika an'i Isla Canela ianao, dia tsy hohadinoinao ny fotoana hahafantarana ilay Algarve Portiogey, izay iray metatra fotsiny. Izy io dia ny faritra fizahan-tany izay tsara indrindra amin'ny firenena mifanila aminy ary manana moron-dranomasina tsara tarehy sy toetra manana tombony koa.
Ho fanampin'izay, afaka mitsidika toerana tsara tarehy toa anao ianao Vila Real de Santo Antonio, izay eo ampitan'ny Guadiana; Faro, miaraka amin'ny katedraly miavaka; Portimao, malaza amin'ny torapasika, na Tavira, miaraka amin'ny tanànany taloha mahafinaritra.
Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any Isla Canela (Huelva)
Ny nosy Huelva dia manana toetrandro mafana sy mafana. Ny ririnina dia mahafinaritra, miaraka amin'ny maripana antonony manodidina ny iraika ambin'ny folo degre Celsius, ary ny vanin-taona mafana, miaraka amin'ny salan'isa efa ho dimy amby roapolo, na dia tsy mahazatra azy ireo mihoatra ny telopolo.
Ny toetra mampiavaka ny klimatolojia amin'ity faritra ity dia ny hamandoana, izay indraindray mahatratra zato isan-jato. Noho izany rehetra izany dia manoro hevitra anao izahay hitsidika azy amin'ny Primavera. Tsy mafana toy ny fahavaratra ary tsy dia mavesatra ny vesatry ny mpizahatany.
Ahoana no ahatongavana any Isla Canela
Isla Canela dia manodidina ny dimam-polo kilometatra miala ny Seranam-piaramanidina Faro, ilay akaiky indrindra. Saingy mifandray tsara amin'ny làlana izy io. Ny tena lehibe dia lalambe A-49, izay avy amin'ny Sevilla ary tonga hatrany amin'ny sisintany Portiogey.
Raha aleonao mandeha lamasinina dia liana ianao hahafantatra fa ny toerana akaiky indrindra dia ny Huelva, saingy enimpolo kilometatra ny halavany. Mba hanaovana io dia io anefa, manana serivisy ahazoana aina ianao fiara fitateram-bahoaka.
Inona no hohanina ao Isla Canela
Ahoana no ahafahana manao izany raha tsy izany, ny sakafon'i Isla Canela dia manome lanja lehibe azy fish and seafood ny faritra. ny Sardine voatono, ny malaza ao trondro nendasina ary ny azy ireo dantelina kely. Ny famaritana kokoa dia ny lovia toy ny kapoka amin'ny paprika ary ny tuna ayamontina. Izany rehetra izany nefa tsy manadino ilay malaza patsa an'i Huelva.
Raha ny tsindrin-tsakafo, ny coca, izay voaomana amandy sy volon'ondry, ary ny borrachuelos, mitovy amin'ny pestiños. Misotro, manana ianao divay distrika, izay manana ny fiantsoana azy avy.
Ho famaranana, Isla Canela ao Huelva dia a toerana idyllic amin'izay ianao afaka miala sasatra mankafy ny morontsiraka sy golf mahafinaritra. Fa koa mba hahafantaranao ireo honahona hafahafa any Ayamonte sy ny Portigey Algarve.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Isla Canela any Huelva
Inona no vidiana any Egypt